Xasan Sheekh oo ka hadlay faragelinta lagu hayo Doorashada | KEYDMEDIA ENGLISH
Madaxweynihii hore ee dalka, ayaa ka dhawaajiyey, in xalka dalka uu waqtigan ku jiro in deg deg doorashada loo qabto.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waqtigan aaminsan in xalka dalka uu ku jiro, in la qabto doorasho, maaddaama dib u dhac weyn uu ku yimid xilligii la filayey in dalka doorasho ay ka qabsoonto, sababo la xiriira Farmaajo oo damaciisu yahay in xukunka uu xoog ku heysto.
Madaxweynihii hore ayaa sheegaya, in 40 maalin lagu soo gabagabeyn karo doorashada aqalka hoose, waase haddii ay ka go'an tahay maamullada iyo dowladda dhexe, oo aan la isku haley karin dhabaha ay marin doonaan doorashada dalka.
Wuxuu ku baaqay in doorashada la de-dejiyo, isla markaana ay noqoto mid hufan oo aan ku saleysneyn musuq maasuq, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Villa Soomaaliya ay dooneyso in ay boobto doorashada, taas oo uu ka digay in maamullada qaar ay u hoggaansamaan.
Villa Somalia ayuu tibaaxay, in aysan war u heynin dadaalkii iyo muruqii la galiyey dowladnimada Soomaaliya, waana tan ku kalifeysa, sida uu ka dhawaajiyey, in ay carqaladeeyaan nidaamka iyo dastuurka dalka u yaalla.
Ujeedka fedraalka ayuu ku tilmaamay, inuu ahaa hannaan dadka loogu dhaweynayo xukunka, isagoo xusay in dowladda iminka jirta ay kordhisay fara-gallinta ay ku heyso maamul goboleedyada dalka, wuxuuna carabka ku dhuftay, in arrintaasi aan la aqbali karin.
Xasan Sheekh ayaa beesha caalamka uga mahadceliyey, garab istaaga ay Soomaaliya u muujiyeen, isagoo ka dalbaday in ay indhaha ku hayaan arrimaha doorashooyinka, oo ay daah-furnaanteeda wal wal badan ka qabaan mucaaradka.